Universal Online TV | तपाईसँग लगानीका लागि पैसा छ ? १३ जलविद्युत् कम्पनीको साधारण सेयर आउँदै तपाईसँग लगानीका लागि पैसा छ ? १३ जलविद्युत् कम्पनीको साधारण सेयर आउँदै
तपाईसँग लगानीका लागि पैसा छ ? १३ जलविद्युत् कम्पनीको साधारण सेयर आउँदै
तपाईसँग पैसा छ भने लगानीका लागि अन्यत्र भौतारिनु पर्दैन । विभिन्न १३ वटा जलविद्युत् कम्पनीले साधारण सेयर(आइपिओ) जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका छन् ।